PressReader - Isolezwe: 2017-11-14 - Imibono ngombiko weyamahhala
Imibono ngombiko weyamahhala
Isolezwe - 2017-11-14 - IZINDABA - BONISWA MOHALE noMCEBO MPUNGOSE
KUHLUKENE imibono ngombiko wophenyo ngemfundo yamahhala uMengameli Jacob Zuma awunekele izwe izolo.
Umbiko weJaji uJonathan Heher uveze ukuthi abafundi abazothola imfundo yamahhala ngabafunda kuma-TVET.
Isishoshovu esaboshelwa imibhikisho ye-#FeesMustFall, uBonginkosi Khanyile, sithe bebevele belindele ukuthi umbiko kaHeher ngeke uze nemfundo yamahhala.
“Kuyacaca ukuthi uhulumeni akanazo izinhlelo zokunika abafundi imfundo yamahhala. Umbiko uthi abafundi bazoboleka imali emabhange okusho ukuthi basazoqhubeka babe sezikweletini. Ngesikhathi sibhikishela imfundo yamahhala besingafuni ukubolekwa imali kodwa besifuna ukuvunyelwa ukuthi sifunde emanyuvesi nasemakolishi mahhala ngoba asinayo imali,” kusho uKhanyile.
Uthe uhulumeni waseNingizimu Afrika unayo imali kodwa inkinga wukuthi akayisebenzisi ngendlela efanele.
UKhanyile, owenza izifundo zeMasters kwiPublic Management and Economics eDurban University of Technology (DUT) uthe bazoqhubeka nokulwela imfundo yamahhala uhulumeni aze acacise ukuthi ubanikeza kanjani.
USolwazi Ahmed Bawa wenhlangano ebhekele amanyuvesi i-Universities South Africa uthe umbiko kaHeher kufanele unconywe ngokuletha imfundo yamahhala kuma-TVET ngoba ngumkhakha ofundisa intsha amakhono ashodayo ezweni afana no-boiler making nokunye.
“Siyajabula ngokuthi kuthiwe imali yokuxhasa amanyuvesi kufanele yandiswe ngoba lokhu kusho ukuthi ngeke sibe khona isidingo sokunyusa imali yokufunda emanyuvesi. Esizokubheka ngeso lokhozi wudaba lwamaContigent Loan okuyimali ezobolekwa ngabafundi ukuze bafunde ngoba kusho ukuthi akekho umfundi ozokhishelwa ngaphandle ngoba engenayo imali,” kusho uBawa.
Uthe kodwa abafundi ngeke bakujabulele lokhu ngoba uma sebeqedile kufanele bakhokhe isikweletu.
Imizamo yokuthola ezinye izinhlangano zabafundi ayiphumelelanga ngenxa yokuthi bacele ukuthintwa namhlanje uma sebeqede ukufunda umbiko.
Bese kunezinyanga ulindelwe ngabomvu umbiko ngemuva kwemibhikiso ye#FeesMustFall ebisezikhungweni zemfundo ephakeme eminyakeni edlule.
NgoMsombuluko uZuma ushicilele umbiko kwi-website yehhovisi lakhe kanti utholakala ngokugcwele kuyona.
Nanka amazwibela ezincomo eziphakanyiswe yikhomishini.
Iphakamise isincomo sokuthi uhulumeni kumele aqhamuke nesu lokwakha izindawo zokuhlala zabafundi. Kumele kubekwe phambili izikhungo ezinomlando wokungabi nemali. Kuthiwa kumele kubambisane osomabhizinisi abazimele nohulumeni odabeni lokuhlaliswa kwabafundi.
Abafundi bakumaTVET Colleges kumele bathole imfundo yamahhala exhaswe nguhulumeni.
Bonke abafunda ezikhungweni zemfundo ephakeme ezizimele noma ezikahulumeni mabathole uxhaso lukahulumeni ngokubambisana namabhange azimele azobaboleka imali ezobizwa nge-Income Contingency Loan. Abafundi bazokhokha uma sebeziphothulile izifundo zabo futhi sebehola ngokwanele ukuthi baqale ukukhokha. Uma umfundi ehluleka ukufinyelela ezingeni lomholo elizokwenza abe namandla okukhokha, uhulumeni uzongenelela. Uma samukelwa lesi sincomo, ikhomishini ithi kufanele sivale isikhala se-NSFAS.
-Ikhomishini ibeke isincomo sokuthi akuqedwe ngemali yokubhalisela ukufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme.
THUMELA umbono ngalolu daba kuFacebook (Isolezwe), kuTwitter (@isolezwenews) noma umqhafazo ku-45773. I-sms ibiza R1,50.